News - banyere ICF (nke a gwara agwa)
ICF, Mpempe akwụkwọ a gwara agwa, na ndị China na-akpọkwa ya nkewapụ EPS modul ma ọ bụ EPS blocks. E mere ya site EPS udi ịkpụzi igwe na ICF ebu. Kinddị ụdị modulu EPS a dị oke mma na mkpuchi ọkụ na mkpuchi mkpuchi. A nwalere ya na nchekwa nchekwa nke ụlọ nke ogige ICF nwere ike iru 65%. Mkpokọta EPS ICF abụghị naanị na-enye ụzọ dị irè maka iwulite mgbidi mgbidi mpụga na mpaghara oyi, kamakwa ọ na-edozi nsogbu nwube dị ka ịchapụ elu nke mgbidi mpụga na ogologo oge. Ihe owuwu ICF bu ihe di mfe na ngwa ngwa, ire na ire uzo n’etiti modulu na eme ka njikọ di ike. Dovetail grooves na ICF modul na-enyere akwa plasta aka ịrapagidesi ike na modulu EPS.
EPS ICF modul bụ ngwaahịa a ma ama ugbu a n'ọhịa ihe owuwu anyị.
E jiri ya tụnyere brik ụrọ ọdịnala, uru ya bụ:
1.Echekwa ego: Ndị mmadụ na-eche na modulu ịzọpụta ike EPS dị oke ọnụ karịa brik ụrọ nkịtị. N'ezie, ibu nke mgbidi modulu EPS dị nfe, nke nwere ike belata ọnụahịa bụ isi, gbasaa mpaghara ojiji, chekwaa ike mmadụ, chekwaa ihe, yana ọnụahịa niile dị mma karịa iji brik ụrọ.
2. Oge nchekwa: iwu ụlọ ahụ bụ ngwa ngwa. Ndi mmadu isii nwere ike mezue isi ulo nke ulo 150 square (tinyere ihe ulo) n'ime ubochi 7, wee mezuo ochicho mma. Oge owuwu dum anaghị agafe ọnwa 3.
3. Ọrụ nchekwa: usoro dị mfe na ike ike. Ọbụna ndị nwunye ụlọ nkịtị nwere ike iwu ụlọ dị ka ngọngọ ụlọ n'okpuru nduzi nke ndị ọrụ aka ọrụ.
4.Energy ịzọpụta na emission Mbelata: ezi thermal mkpuchi mmetụta, na-ekpo ọkụ n'oge oyi na oyi na okpomọkụ. Na North China, n'ihi obere okpomọkụ n'oge oyi, a na-etinye usoro kpo oku mgbe niile n'ụlọ ọ bụla. Ejiri ICF modul ulo nyere aka belata uzo ato nke oku oku n'ime ime obodo, na-ebelata oke oku na anwuru na oku.
5..Srong siri ike na ala ọma jijiji na-eguzogide. Mgbe ị jiri EPS ICF blọk na-ewu ihe, a na-agbanwe usoro brik nkịtị ka ọ bụrụ ihe mejupụtara nke ọma na-enweghị ọnụ ahịa na-arịwanye elu, na seismic ike abawanyela ugboro 7. Dịka nyocha nke Testlọ Ọrụ Nnwale Ala Ọma Jijiji, mgbe ịdị ukwuu karịrị 8 ogo, nrụrụ nke ụlọ ahụ adịghị njọ, na mgbe ike dị ala karịa ogo 8, isi ụlọ ahụ adịghị emebi.
N'ihi nke dị n'elu, ụlọ ọrụ ICF wuru ụlọ na-eme ka ị ghara inwe nchekasị. EPS ICF modul ụlọ na-agbaji usoro ụlọ ọdịnala ma mezuo ebumnuche nke ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ndụ ndụ ndụ, na-ekwu, ikuku carbon dị ala, nchekwa ọkụ na mkpuchi ọkụ, nchekwa gburugburu ebe obibi na ogologo oge, yana arụmọrụ dị egwu. Ọ bụ ezigbo nhọrọ mgbe ị na-arụ ụlọ ọhụụ.